Nhau - Nyowani Halliburton yemasanganiswa yekuboora inowedzera kugadzikana, kuchera kugona
Nyowani Halliburton yemasanganiswa yekuboora zvishoma inowedzera kugadzikana, kuchera kugona
HOUSTON- Halliburton Kambani yakaunza Crush & Shear Mbeu dzakauchikwa Drill Bit, tekinoroji nyowani inosanganisa kushanda kwevechinyakare PDC vanocheka netoriki-yekudzora kugona kwezvinhu zvinokungurutsa kuwedzera kuchera kugona uye kuwedzera kudzikama zvishoma kuburikidza nekuchinja mafomati.
Parizvino hybrid bit matekinoroji anobaira kuchera nekumhanyisa nekuisa vanocheka uye kutenderera zvinhu munzvimbo dzisina basa. Crush & Shear tekinoroji inofungidzira iyo diki nekuisa roller macones munzvimbo yediki kuti inyatsopwanya magadzirirwo uye inofambisa vanocheka pabendekete rekukwirisa dombo. Nekuda kweizvozvo, iyo diki inowedzera kutonga, kusimba uye inowana yakakwira mwero wekupinda.
"Isu takatora nzira yakasarudzika yehybrid bit tekinoroji uye takagadziridza iyo yekucheka kuwedzera kuchera kushanda nekupa yakagadziriswa lateral kugadzikana," akadaro David Loveless, mutevedzeri wemutungamiri we Drill Bits and Services. "Crush neShear tekinoroji inobatsira vashandisi kuburitsa nekukasira nekudzora zvirinani mune rakaoma-dombo, matsime-anotsemuka-mutsika uye echinyakare hybrid kana roller roller cone curve kunyorera."
Chidimbu chimwe nechimwe zvakare chinogadzira Dhizaini kuCustomer Interface (DatCI) maitiro, Halliburton yemuno network yevanochera zvimiti nyanzvi dzinobatsirana nevashandisi kuti vagadzirise mabiti ezvishandiso zvakanangana nebheseni. Munharaunda yeMidcon, iyo Crush neShear bit yakabatsira anoshanda kuti abudirire kupedzisa chikamu chavo che curve mukumhanya kumwe chete - kuwana ROP yemamita makumi maviri nemashanu / awa ichirova iyo ROP mukukanganisa zvakanaka neanopfuura makumi maviri neshanu muzana. Izvi zvakachengetedza mutengi anodarika $ 120,000.